August 2019 – SATTA
“Wasiirka Awqaafta & Arrimaha Diinta Soomaaliya ”. Boqortooyada Sacuudi Carabiya sanadkan waxay Xujayda u diyaarisay adeegyo casri ah.
Dayaacadda ku dhacday qeyb kamid ah Xujeyda waa lagula Xisaabtami doonaa Shirkadaha ku lugta lahaa.
Malaayiin Muslimiin ah oo maanta taagan Banka Carrfo.
Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay Xujey ku dhibaateysan Makka